Mutongo pamusoro peBani Rechiratidzo (1-14)
Mutariri Shebna anotsiviwa naEriyakimu (15-25)
Kufananidzwa nehoko (23-25)
22 Mutongo pamusoro peBani Rechiratidzo:*+ Maita seiko zvamakwira mese pamusoro pematenga edzimba? 2 Wakanga uzere nenyonganyonga,Guta rine mheremhere, guta rinopembera nemufaro. Vanhu vako vakaurayiwa havana kuurayiwa nebakatwa,Kana kufira muhondo.+ 3 Vatungamiriri vako vese vane utsinye vakatiza pamwe chete.+ Vakasungwa pasina kurwiswa neuta. Vaya vese vakawanikwa vakabva vasungwa,+Kunyange zvazvo vakanga vatizira kure. 4 Ndokusaka ndakati: “Musaramba makanditarisa,Uye ndichachema chaizvo.+ Musaramba muchiedza kundinyaradzaPamusoro pekuparadzwa kwemwanasikana* wevanhu vangu.+ 5 Nekuti izuva rekuvhiringidzika nerekukundwa nerekurohwa nehana+MuBani Rechiratidzo,Zuva rinobva kuna Changamire Ishe, Jehovha wemauto. Masvingo ari kuputswa+Uye vanhu vari kushevedzera kugomo. 6 Eramu+ yatora homwe yemiseveNengoro dzine vanhu nemabhiza,*Uye Kiri+ yagadzirira nhoo.* 7 Mapani ako akanaka chaizvoAchazara nengoro dzehondo,Uye mabhiza achamira panzvimbo dzawo* pagedhi, 8 Uye chinovhariridza* Judha chichabviswa. “Pazuva iroro uchatarisa kunochengeterwa zvombo zveImba yeSango reRebhanoni,+ 9 uye muchaona nzvimbo zhinji dzakatsemuka dzeGuta raDhavhidhi.+ Muchachengeta mvura mudziva rezasi.+ 10 Muchaverenga dzimba dzemuJerusarema, uye muchaputsa dzimba kuti musimbise rusvingo. 11 Muchagadzira dziva pakati pemasvingo maviri rekuisa mvura yedziva rekare, asi hamuzotarisi kuMuiti waro Mukuru, uye hamuzooni iye akaita kuti rivepo kare kare. 12 Zuva iroro, Changamire Ishe, Jehovha wemauto,Acharayira kuti pave nekuchema nekusvimha misodzi,+Kuti misoro igerwe uye kuti vanhu vapfeke masaga. 13 Asi pane kuita izvi, pane mhemberero nemufaro mukuru,Kuurayiwa kwemombe nemakwai,Kudya nyama uye kunwa waini.+ ‘Ngatidye uye ngatinwe, nekuti mangwana tichafa.’”+ 14 Jehovha wemauto akabva azivisa izvi munzeve dzangu: “‘Hamuzoyananisirwi kukanganisa uku kusvikira mafa,’+ anodaro Changamire Ishe, Jehovha wemauto.” 15 Zvanzi naChangamire Ishe, Jehovha wemauto: “Pinda mune mutariri uyu, Shebna,+ uyo ari kuona nezveimba yacho,* uti, 16 ‘Uri kudei pano, uye uri kuda ani pano, zvawakazvicherera guva pano?’ Ari kuzvicherera guva panzvimbo yakakwirira; ari kuzvicherera nzvimbo yekuzororera* paibwe. 17 ‘Inzwa! Jehovha achakukanda pasi zvine simba, haiwa iwe murume, uye achakubvuta nesimba. 18 Achakupeta-peta zvakasimba okukanda sebhora munyika yakafara. Uchafira ikoko, uye ikoko ndiko kuchava nengoro dzekukudzwa kwako, zvoita kuti imba yatenzi wako inyadziswe. 19 Ndichakubvisa pachinzvimbo chako, ndokudzinga pabasa rako. 20 “‘Pazuva iroro ndichashevedza mushumiri wangu Eriyakimu+ mwanakomana waHirikiya, 21 ndomupfekedza nguo yako. Ndichasunga zvakasimba bhandi rako rejira paari,+ ndoisa masimba ako muruoko rwake. Uye achava baba kuvagari vemuJerusarema nekuimba yaJudha. 22 Ndichaisa kiyi yeimba yaDhavhidhi+ papfudzi rake. Achavhura uye hapana achavhara; achavhara uye hapana achavhura. 23 Ndichamurovera sehoko panzvimbo yakasimba, uye achaita sechigaro cheumambo chekukudzwa kuimba yababa vake. 24 Uye vachaturika paari kukudzwa* kwese kweimba yababa vake, kureva vazukuru nevana vake,* iyo midziyo yese midiki, midziyo yakaita sendiro, pamwe chete nezvirongo zvese zvihombe. 25 “‘Pazuva iroro,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto, ‘hoko yakaroverwa panzvimbo yakasimba ichabviswa,+ uye ichatemwa yowira pasi, uye zvinhu zvayakatakura zvichawira pasi zvoparara, nekuti Jehovha pachake ataura.’”
^ Zvinoratidza sekuti Jerusarema ndiro riri kutaurwa.
^ Kana kuti “yabvisa nhoo mainochengeterwa.”
^ Kana kuti “vatasvi vemabhiza vachamira panzvimbo dzavo.”
^ Kana kuti “chinodzivirira.”
^ Kana kuti “nezvemuzinda wacho.”
^ ChiHeb., “pekugara.”
^ ChiHeb., “uremu.”
^ Kana kuti “nenhungirwa dzake.”